तपाईंले प्रयोग गर्ने मोबाइल तपाईंका लागि कति हानिकारक छ ? यसरी जान्नुहोस् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/तपाईंले प्रयोग गर्ने मोबाइल तपाईंका लागि कति हानिकारक छ ? यसरी जान्नुहोस्
कुनैपनि मोबाइल किन्दा त्यसको बट्टाको बाहिर टाँसिएको पर्चामा नै उक्त मोबाइलको सार रेट उल्लेख गरिएको हुन्छ । तपाईंले मोबाइल खरिद गर्दा सार रेट १.६ भन्दा माथि उल्लेख भएको मोबाइल नकिन्दा नै राम्रो हुन्छ । मोबाइल किन्न जाँदा बिक्रेताहरुसँग आफूले किन्न लागेको मोबाइलले कति रेडिएसन उत्सर्जन गर्छ भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ।
कतिपय मोबाइलमा यस्तो कोड डायल गर्दा पनि साररेटबारे जानकारी उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् केही मोबाइल कम्पनी प्रयोगकर्तालाई आफ्नो मोबाइलले उत्सर्जन गर्ने रेडिएसनको मात्राबारे जानकारी दिन चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो मोबाइलको मोडेल नम्बर उल्लेख गरेर इन्टरनेटबाट पनि त्यसको सार रेटबारे सर्च गरेर जान्न सक्नुहुन्छ । यदि त्यसको सार रेट १.६ वाट प्रति किलोग्रामभन्दा माथि छ भने त्यस्तो फोन तपाईंको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
विशेषज्ञहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने कनेक्टिङ नेटवर्कका आधारमा चल्ने कुनै पनि डिभाइसलाई रेडिएसनबाट मुक्त राख्न सकिँदैन । अर्थात् यी उपकरणहरु रेडिएसनबाट मुक्त भएर चल्न सक्दैनन् । तपाईंको मोबाइलले कुनै नेटवर्कसँग पहुँच स्थापना गर्न पनि रेडिएसनले नै काम गरेको हुन्छ । तर, त्यसको मात्रा कम या बढी भन्ने मात्रै हुन्छ । हामीले कतिपय मोबाइल यस्ता पनि प्रयोग गरेका हुनसक्छौं, जो विकट ठाउँमा पनि राम्रोसँग नेटवर्कको पहुँचमा हुन्छन् ।
धन कमाउन मलेसिया गएका राजु महिना दिन देखी सम्पर्क बिहिन सेयर गर्नुहोला !
“आफ्नै विद्यार्थी’संग रात विताउन शिक्षि’काले होटल’मा कोठा बुक गर्दा…..” भिडियो